Home Wararka MW Farmaajo oo caawa ku howgaliyay kooxdiisa Qaaqlayaasha in ay mucaradaan shirkii...
MW Farmaajo oo caawa ku howgaliyay kooxdiisa Qaaqlayaasha in ay mucaradaan shirkii maanta ka dhacay Hotelka Makka
Kooxada Qaaqlaayaasha ee uu horseedka uu u yahay Cali Maxamed Geedi ayaa waxaa caawa lagu amray in ay maalinta berito ah ku qabtaan magaalada Muqadishu shir looga soo horjeedo shirkii ay maanta Hotelka Makka Al Mukarama ku yeesheen Beelaha Abgaal iyo Xawaadle.
Cali Maxamed Geedi iyo Salaad Cali Jeele oo mushaar lagu siiyo in ay mucaaradka dowlada ka cayaan idaacadaha ayaa la filayaa in ay maalinta berito ah idaacadaha ka cayaan madaxdii iyo oday dhaqameedkii ku kulmay hotelka Makka Al Mukaramah.
Shirkii maanta ayaa go’gol xaar ah shirar baalaran oo lagu qaban doono magaalada Muqadishu maalmaha iyo asbuucyada soo socda kuwaas oo looga arinsan doono xaalada guud ee uu dalku maraayo iyo sidii loo joojin lahaa dhiig-baxa ku socdo qarananimada Soomaaliyeed.
Cali Maxamed Geedi ayaa shirko la ah xaaska Madaxweynaha Zeynab Macalin Cabdi, waxaana dhawaan lagu siiyay qandaraas in uu dhiso qaybo ka mid ah madaxtooyada isaga oo isticmaalayo shirkada lagu magacaabo Heliwaa Construction Campany. Shirkadaan ayaa waxaa la leh Cabdi Alasow (Abdi Jiinow) oo labada u adeega xaaska Madaxweynaha.